Rikoooo.com - Virus voamarika ao amin'ny faritra Sardinia ampahany 3 FSX
Virosy hita tao amin'ny faritra Sardinia faritra 3 FSX
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by bacco » 19 Mar 2017, 01:01
Vao avy nesorina tao amin'ny AVG ny exe. Toa misy otrikaretina na zavatra mitovy aminy ao anatin'ilay installer.
Azafady mba mifandraisa amin'ny mpanoratra ary angamba aza misoroka ny fampidinana bebe kokoa mandra-piorina
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Growler37 » 19 Mar 2017, 01:39
Tsy mila manahy ianao, azonao atao ny manome toky fa diso fotsiny ny fijerena ilay rindrambaiko anti-virus. Ny Avast anti-virus, dia manao toy izany koa. Noho ny antony sasany dia tsy faly amin'ny mpikatroka ireo rakitra .exe installer izay atolotra ao amin'ny fampirimana scenery. Hitako matetika dia mitranga miaraka amin'i Avast io hatramin'ny fanavaozana ilay rindrambaiko roa volana lasa izay. Tena sarotiny loatra ilay rindrambaiko, miaraka amin'ireo fisie maro misy tsy manimba tanteraka! Miahiahy aho fa mitovy ihany ny olana olana miaraka amin'ny AVG.
Na izany na tsy izany dia manantena anao aho. Ilainao fotsiny ny manafoana ny fisafoana AVG mivantana anao mandritra ny minitra 10, na ho haingana, hamita am-pifaliana ny fametrahana. Ny zava-tsarin'i Sardinia tena tsara, IMHO dia mendrika hampiany amin'ny simetinao ihany. Mirary ny soa indrindra.